चारधामको दूर्दशा भोगेर फर्केकाको बयान- ‘जता हेरेपनि शवैशव’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अमेरिकामा ख्यातिप्राप्त नेपाली इन्जिनियरको निधन
पाप हो र ? →
चारधामको दूर्दशा भोगेर फर्केकाको बयान- ‘जता हेरेपनि शवैशव’
७ असार, काठमाडौं । दुःखकष्ट र पीर व्यथाबाट पार पाउँदै पुण्यप्राप्तीको लागि भारतको चारधाम गएका हजारौं दर्शनार्थीले यसअघि कहिल्यै नभोगेको कष्ट झेल्नुपरेको छ । देवीदेवताको दर्शन गर्ने क्रममा कतिको मृत्यु भएको छ । कति अलपत्र परेर यता जाने कि उता जाने हालतमा छन् । केही भने मुश्किलले ज्यान बचाएर त्यहाँबाट फर्कंदैछन् ।
भारतको उत्तराखण्डमा एकहप्ताअघि आएको बाढी पहिरोले चारधाम यात्रामा गएका हजारौं भारतीय र नेपाली दर्शनार्थीको बिजोग भएको छ । बाढी पहिरोमा परी कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने यकिन नभएपनि सयौं हताहती भएको आशंका गरिएको छ ।
अहिले वर्षा केही कम भएपछि फसेकाहरुको उद्दार काम शुरु भएको छ । केही भने आफ्नै सुरले र्फकंदैछन् । तिनैमध्ये एक हुनुहुन्छ, काठमाडौं कलंकीका प्रद्युम्न खड्का । ‘हामीसँगै गएका सातजना साथीको अझै अत्तोपत्तो छैन, हामी केही बैकल्पिक बाटो भएर हरिद्वारतिर र्फकंदैछौं’ खड्काले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।
६ दिनअघि देखिएको बाढीपहिरो र त्यसले मच्चाएको बितण्डाको दृश्य उहाँले यसरी हामीलाई सुनाउनुभयो :
‘झण्डै दुईहप्ताअघि काठमाडौंमा हामी चारधामको दर्शन गर्न पुगेका हौं । गंगोत्री र यमुनोत्रीको दर्शन गरेपछि हामी केदारनाथतिर लाग्यौं । त्यहाँ हामीजस्तै नेपाली र भारतीय हजारौं दर्शनार्थी थिए । ६ दिनअगाडि बिहानको बेला हामी दर्शन गर्दैथियौं, एकैपटक ठूलो बाढी र पहिरो आयो । मैले हेर्दाहेर्दै कतिलाई बगायो । कति पुरिए । हाम्रो रुवाबासी भयो । अत्तालिँदै यताउता दौडियौं । तल खोला नजिकै राखिएको हाम्रो बस पनि बगायो । हाम्रो जस्तै झण्डै दुईसय वटा गाडी खोलाले बगाएको छ । केदारनाथमा रहेका हाम्रो समूहका कसैलाई केही भएन । तर हामीसँगै बदि्रनाथ गएका सातजना बेपत्ता छन् । बाढी पहिरोपछि जता हेरेपनि शवैशव । रुवाबासी र छटपटी । कति खान नपाएर बिजोग छ ।
जाँदा सद्धे बाटो फर्कंदा नामो निशान छैन । हामी कसरी बाँच्यौं भनेर अहिले अचम्म लागिरहेको छ । त्यहाँबाट हरिद्वारा आउने मूल सडक त भत्केर केही छैन । गाउँबाट आउने सानो सडक रहेछ । अहिले हामी त्यही बाटो हुँदै हरिद्वारतिर र्फकंदैछौं । त्यहाँको बयान गरेर साध्यै छैन । धेरै नेपाली फसेका छन् । दर्जनौंको मृत्यु भएको हुन सक्छ ।’
सरकार के गर्दैछ ?
वर्षा शुरु भए लगत्तै बाढी र पहिरोले देशका पश्चिमी क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति भएको छ । देशभित्रैका बाढी पहिरो पीडितलाई उचित राहत र पुनस्र्थापना पुर्याउन नसकेको सरकारले देश बाहिर फसेका नेपालीलाई तत्काल केही गर्न सक्ने कुरो पनि भएन । तैपनि भारत सरकारसित सम्पर्क र समन्वय गरेर काम भैरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘अहिलेसम्म ६०-७० जनाको उद्दार भैसकेको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’४८ जना नेपाली बदि्रनाथ र केदारनाथबाट हरिद्वारतिर हिँड्नुभएको छ ।’ चारधाम गएकामध्ये ३५० देखि ४०० नेपाली त्यहाँ अलपत्र परेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म कति हताहति भए भन्ने चाहिँ आएको छैन, हामी पहिले जीवित व्यक्तिहरुको उद्दारमा लागेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो-’भारतले हेलिकोप्टरमार्फत उद्दार गरिरहेको छ ।’ उद्दारमा समन्वय गर्न भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट दुईजना प्रतिनिधि त्यसतर्फ गएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।